HIFA is an annual six-day festival that brings together Zimbabweans and various other nationalities as they take part in a showcase of theatre, music, dance, fine art, and poetry. The festival has been around since 1999 and is the biggest festival of its kind in the country.
Alliance Media's core Corporate Social Responsibility projects centre around education, youth empowerment and the support of orphanages and various NGO projects across Africa. This is the second year that Alliance Media has ventured into supporting the Arts as a result of a great response in 2013.
Alliance Media Zimbabwe offers an extensive network of media options stretching from the eastern highlands across to Chirundu in the north. Aside from operating in Zimbabwe, Alliance Media is known as Africa's largest Out Of Home (OOH) media company, offering billboards and airport advertising in 22 other African countries. Outdoor advertising and airport media in Zimbabwe can be booked by contacting Alliance Media Zimbabwe on moc.aidemecnailla@ewbabmiz or the Africa desk of Alliance Media South Africa on moc.aidemecnailla@ofni.